UPenny Veza Software | Isikhoji sokuthenga - RapidAuctionSoft
plugins / ngcono
Rock Izibali Solid World Class Support
Video: UPenny Veza Software - RapidAuctionSoft
UPenny Veza Software
Wamkelekile RapidAuctionSoft – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of UPenny Veza Software and the Best PHP Penny Auction Script ikhona
Buza ngayo yethu 10% inani lomdlalo isiqinisekiso 1-603-557-1563
Thina ziyakwazi na ukunika nokuhlanganisa imenyu owakungqina- ngoku, ukuba banikele kuwe umsebenzi epheleleyo turnkey!!!
Sele unayo iwebsite penny esidlangalaleni?
Ngaba mthengisi yakho isoftware kukushiya azixhaswanga?
Sisekelwe phezu ubuchwepheshe endala?
Ingaba zikhona bugs?
Ngaba imeyili zigcine spam?
Ngaba SEO yakho ayisebenzi? Ngaba na kwiselula?
Sinako ukuhlanganisa uyilo yakho nesiqulatho kwinkqubo yethu kakhulu ophezulu
Update entsha – Ibandakanya imifanekiso engcono kwikona (khetha kwi 3 izimbo kunye 8 imibala, konke okubhaliweyo enamandla ngoku ulwimi kuxhaswa njengokuba), RSS, RSS + Atom, Sitemaps for yemnyama.Iifandesi nesiqulatho CMS kunye nezinye iinguqulelo ezininzi!!!
Sijonge phambili kokuxoxa uPenny izimvo zakho Veza Website nawe. Wonke isigulane izimvo zabo kwaye sinandipha ukubhala isiko Veza Code, akukho lutho elukhuni kuthi. Sifumana nemincili malunga zonke iinkonzo zethu iingcamango, enyanisweni ke eyona yomsebenzi wethu…sithanda ukuba nenxaxheba uvuyo lwakho
Biza us kunini, Sisebenza kunye neenkampani aphesheya lonke ixesha
Ngoko ke wena enzulu malunga e-commerce okanye noPenny Veza Software ishishini?
Wenze uphando sakho weva amabali embi malunga nezinye namaqonga e-commerce, futhi ukhathazekile malunga bathenge kumthombo owaziwayo. Kulungile sinayo umva wakho. Kunye nokuphuculwa free A isiqinisekiso esingcono kushishino kunye xesha lide cala ezake. Zama ukuba 14 iintsuku iingozi kwenye server yethu…kwaye xa sele ukulungele ukhankase kumncedisi wakho, okanye khetha enye pof izisombululo zethu esingethwe
Kuba lilincinane ixesha esinalo isithuba 3 websites beta….la 3 ewebhu ukhankase kwaye uvavanyo ngendlela uya kufumana khona isoftware simahla ubomi…ngaphandle uyilo isiko okanye iinkqubo. Thumela imeyili ngokuphathelele beta uvavanyo ukuze iqela lethu uphuhliso
UPenny Veza Script
Ingaba ufuna Solution uPenny Veza Software, Penny Auction Okushicilelweyo Solutions okanye E-Commerce Solution
Best uPenny Veza Software, Penny Auction Script Solution ezikhoyo
in 2018 sabona ukuba abathengisi eziliqela uPenny Veza Software kunye software E-commerce besebenzisa ubuchule lixesha kwaye kancinane ukuba akukho zikhokelo mihla. Ngoko saqala ukubhala, thina wabhala ikhowudi lwethu ukusuka emhlabeni ukuya usebenzisa CodeIgniter ukuze PHP yethu. CodeIgniter i MVC Framework lwangoku (imodeli, umbono, isilawuli), ohlukanisa logic apho kwafuneka ukuba, kuyinto super lula ukufunda nokuphuhlisa ngenxa, ngokukhawuleza PHP boqobo, kuthembeka ngakumbi yaye ubungqina ngakumbi kwixesha elizayo.
Kodwa oko akwanelanga, saqaphela ukuba isizathu sokuba inkoliso abancedisi PHP kuphela uPenny Veza Software kukungakwazi kuba sithembele Ajax izibambi, abhide ethunyelwayo. Ngoko waya konke oku Socket.io and Node.JS. Ethetha ukuba umncedisi ukuthumela imiyalezo ngqo kumxhasi kungabikho mfuneko iklayenti lokucela ngokuqhubekayo data ezintsha. izibambi zethu okunene ukulandelela okufunwa 1000th kaThixo owesibini. Ethetha ukuba abhide yethu ngokukhawuleza, ezinzile othembeke ngakumbi nezinye izisombululo. Musa ukuzikhathaza umntu ukukhalaza malunga ezilahlekileyo bid yesibini wokugqibela. yabalindi yethu kulandelelwa ngokuchanekileyo ngaphezu kwezinye iindawo. Uyakwazi ukubona ngokoqobo utshintsho ezikhulu kwi yesibini efanayo ukuba abasebenzisi abaninzi yitsho ngexesha elifanayo.
World class uPenny Veza Design
Ekugqibeleni saqonda ezininzi labaxhasi elinokwenzeka awunangxaki ngakumbi ukuhlawula ngokusingatha kunye nolondolozo lweentlawulo lula ngenyanga, kuhlohla Balanced iiseva ezithembekileyo, enikwa elinye best iinkampani server ehlabathini! Ngoko ngayo yonke into kuwe. Ukuba basoyise iseva eqhelekileyo, ke sinako kwaye iza kukushukumisela ukuba umncedisi wakho ukuba nimelwe. Kodwa kusafuneka yonke inzuzo version ezilawulwa software yethu.
Kuba limited lonke ixesha bonke abathengi abatsha bafumana ekufakeni, 5 iiyure zoqeqesho kunye 5 iiyure design free.
Sinikezela ngaphezu nje Ukuthengiswa Solutions uPenny
Buza ntoni plugin yethu kwinqwelo othengela kuyo.
Usekela Ukongeza iilwimi ezintsha
Rock izibambi-Solid, kulandelelwa kumawaka yesibini. Ukwenza ukuba inkqubo abhide echanekileyo ekhoyo.
ZAMA PHAMBI uthenga. free 2 ngeveki trial.
Clones sikuwo ziquka
Kwakhona 25 imixholo Penny Veza Software oko kunokusetyenziswa kuzo zonke iimveliso zethu, intsingiselo nezimo enkulu Design for uPenny yakho ifandesi Software
Buza malunga nezinye iintlobo kwifandesi, senza okuninzi nje Veza Software uPenny
Hlola demo bethu bahlala Kwisayithi yethu idemo!!!
Penny Auction Iimpawu Software
Ubhaliso Ngokwesiqhelo phambi kokufaka isicelo, lwegama lomsebenzisi luyafuneka ukuba babhalise.
Abasebenzisi Login anganempembelelo iingenelo ezininzi yokuba lilungu – ungene kwi page zazo akhawunti, beka emizameni, ukongeza imali kwi-akhawunti zabo kunye nemisebenzi ezininzi.
Ukuthenga ngetyala / Yongeza Ibhalansi Abasebenzisi ukuthenga ngetyala kwaye wongeze imali eseleyo kwi-akhawunti zazo mhlawumbi nge yesango intlawulo, bank, okanye idiphozithi ngqo phambi kokufaka isicelo.
Indawo eethenda Abasebenzisi ukukhetha imveliso nokubeka ixabiso. Umsebenzisi unako ukubeka iziniki ezininzi ngokuthanda kwabo de wina. Kananjalo mhlawumbi beka bid enye okanye ukugcina bid zabo kwaye usebenzise Bidbutler ukuba sethubeni ngokuzenzekelayo egameni labo.
Bidbutler Bidbutler, obizwa autobid okanye master bid, apho le nkqubo ubeka bid zakho agcinwa ngokuzenzekelayo zonke imizuzwana elishumi, okanye nayiphina into lokuphumla ucacise.
Eethenda SMS akuyomfuneko ukuba ubhalise uze ungene kwi ukuba bid SMS. Inkcazelo abhide SMS bunokubonwa kwentengiso ezinxulumene kwaye ezibekwe nomphati site.
Live Abasebenzisi Bid Imbali ungabona kunye neminye imisebenzi yabo ilizwi ukusuka kwicandelo kwimbali bid ngaphakathi page iinkcukacha imveliso.
Winner Ophumelele kwentengiso ngumntu wokugqibela ukubeka amaxabiso xa ixesha ifikelela imizuzwana zero. Ophumelele uhlawula ixabiso lokugqibela nto esidlangalaleni (eya kuba ngaphantsi ixabiso elililo).
Iintlobo Auction Kukho iintlobo ezininzi efandesini kwimarike; kunjalo, iintlobo ithandwayo Ukuthengiswa rhoqo, Veza Intengo eme, Nilbitter Auction, Veza Free and rookie ezamahala Ukuthengiswa.
CMS Umxholo inkqubo yolawulo (CMS), apho uyakwazi ukwenza uphendlo-injini amaphepha awahlukeneyo friendly site lakho kwifandesi – ezifana Malunga thina, Qhagamshelana nathi, umthetho wabucala, ngokoMthetho & Conditions, FAQ kaThixo, Nceda, Indlela Esebenza njalo njalo.
11 Akhawunti yoMsebenzisi
Uluhlu Veza Othi yangoku – Apha uyakwazi ukujonga ulwazi lwakho / yangoku Live Ukuthengiswa ukuba abhide.
Uluhlu Auction Ngayo – Ukusuka apha ukujonga uluhlu lwakho yemnyama.Iifandesi iphumelele kwaye ahlawule ixabiso lokugqibela.
Bid History Archive – Abasebenzisi ukujonga bid yokugcina babo apha.
Faka Found (Thenga Bid Pack) – Abasebenzisi ungengeza ukulingana ukwenzela ukubeka isicelo kweli candelo.
Uhlobo lokuhlawula – Abasebenzisi Ungakhetha naliphi na indlela yokubhatala, bonke ethembeke kakhulu, kwaye ahlawule ixabiso lokugqibela esidlangalaleni ukuba. PayPal esangweni intlawulo emiselweyo.
Womsebenzi History – Abasebenzisi ukubona yonke imisebenzi okwenziwayo yabo kweli candelo.
hlenga Code – Abasebenzisi isithembiso codes ezizodwa zibonelelwa yi admin njengendlela yokukhuthaza site.
Jonga a Friend – Abasebenzisi anokubhekisela abahlobo ezininzi ngokuthanda kwabo. Kuba zonke bathunyelwe babe nako ukufumana iikhredithi ibhonasi ebekwe yi admin.
Tshintsha iphasiwedi – Abasebenzisi ukutshintsha zabo igama akhawunti esuka apha.
Akhawunti ezivaliweyo – Abasebenzisi ukuvala akhawunti zabo kwaye ayikwazi ukuvula-akhawunti zabo kunye nedilesi ye email elifanayo kwakhona.
Newsletter Setting – Abasebenzisi mhlawumbi ukwenza okanye ukukhubaza lo newsletter yorhumo ukhetho kweli candelo.
Bhalisa Newsletter Iindwendwe ubhalisele ngenxa yeendaba ifandesi ukufumana izaziso, updates nokunikelwa.
Udidi Management admin ungalawula (ukwengeza, hlela okanye ususe) iindidi kunye khangela iindidi mhlawumbi ngegama okanye ID.
Ngotyefezo Management Admin ongeze, hlela okanye ucime yemnyama.Iifandesi kwaye phendla kubo ngegama, isimo, uhlobo ne ID. Lo admin kwakhona khuphela i ifandesi efanayo kwakunye sijonge imbali sayo ephakathini kunye nezinye iinkcukacha.
Ingxelo ngotyefezo Admin / Delivery ungabona ingxelo kwentengiso eliphumelelayo okanye iinkcukacha ophumeleleyo. Lo admin uyakwazi ukutshintsha isimo ifandesi xa kusalindwe ukunikezelwa kweli candelo.
Website Ukubeka admin ungenza izicwangciso site kweli candelo.
Management ilungu admin kungaba ukwengeza, hlela okanye ususe abasebenzisi okanye ukhangele ukuba isimo sabo, igama ne ID. Lo admin nako ukubona abhide abasebenzisi ' & transaction umlando.
CMS admin ongeze, hlela okanye ukucima nasiphi na isiqulatho site ezifana Help, FAQ, Yemfihlo njalo.
Email Ukubeka admin ungakhetha isicwangciso imeyile kweli candelo – Ukuvula i email, ukhohlwe iphasiwedi etc.
Management Winner admin ungabeka uluhlu ziintshatsheli umfanekiso wabo, idilesi, kunye neempendulo zazo.
Manani Site I admin uyakwazi ukujonga ingxelo website kwaye ukurhweba ingxelo CSV.
Time Zone Ukumisela admin ungacwangcisa isicwangciso izowuni yexesha ilizwe wakhe kweli candelo.
Hambisa / Management Promotion Special
Ixesha Lo admin ungacwangcisa nezaphulelo kunye neebhonasi ukukhuthaza website lwabo. Iikhowudi ibhonasi iya kuba ixesha elimisiweyo umda.
Ibhonasi Ukubeka admin uyakwazi ukucwangcisa lokubhalisa kunye nokudluliselwa neebhonasi.
Bid Pack Management admin ungacwangcisa Imiqulu bid ezahlukeneyo kunye lamatyala. Lo admin ungengeza, hlela okanye ukucima Pack nganye Bid.
Uncedo / Management FAQ Yenza Uncedo kunye FAQ amaphepha kunye nenkcazelo.
IP Block admin zinokuyithintela nayiphi IP ukuze website yofikelelo.
Tshintsha Password admin uyakwazi ukutshintsha zabo igama akhawunti esuka apha.
relist Auto kunye uluhlu auto yemnyama.Iifandesi
Ngena nge Facebook okanye Twitter
addons ezininzi / plugins neempawu optiona
Ibhalwe zikhokelo mihla ithetha uzinzile kwaye unokuxelwa kwangaphambil
Ingama lakho (efunekayo)
Imeyile yakho (efunekayo)
Hambayo yakho (efunekayo)
Dropship addon entsha inkxaso Doba kunye MegaGoods, dropshippers ukuba zongezwe kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Vuka, yimisinga ivenkile kwi ononqakrazo olumbalwa
Ukuqalisa theming wethu 20+ templates, combos template sub…cishe 30 imixholo kunye nokukhula…Ngoku ungenza kudala phezu 500+ Uyilo ihlukile ngokuphelele. ezininzi ezisekelwe phezu iiholide
Support Language Dynamic, ukuba isayithi yakho ukufikelela abantu abaninzi
New Addon for yemnyama.Iifandesi uPenny, Shopping kunye POS ikhowudi…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (evule, ezivenkileni okanye yemnyama.Iifandesi…eBay yemnyama.Iifandesi eza ekupheleni konyaka BTW). Le addon usebenza iimveliso kunye meta tags kanye ngoku, kodwa ifuna akhawunti google ngenxa translation API yabo. […]